Gonzalo Castro "Chori" - Umdlali wasesiswini odlala Uruguay, umdlali we qembu, "Malaga"
Gonzalo Castro (futbulist) - Uruguay mdlali emaphakathi, odlalela iqembu iSpanishi, "Malaga", kanye eqenjini lesizwe Uruguay football kazwelonke ithimba. Champion izibonelo Uruguay ngo-2002 no-2006, owawina ehlala Cup 2005. Uruguay Footballer kakhulu liyabonakala by isidlaliso sakhe "Chori", okwayinika abalandeli Spanish nabalandeli.
Chory Castro: Biography, ujwayele football
Wazalelwa ngo-September 14, 1984 emzini Trinidad (inhlokodolobha uMnyango Flores), Uruguay. Ngakhulela umkhaya ovamile - uyise wayengumGreki eyinduna amaqembu yezolimo epulazini, unina - umfundisi amakilasi aphansi secondary school. Kusukela ebuntwaneni, Gonzalo Castro ngokushesha wathandana football - ngesikhathi ngineminyaka emithathu ubudala wayengumuntu fan wangempela wendawo football club "Nacional". Gonzalo njalo ngezimpelasonto noyise wachitha isikhathi phambi TV, ukhula lwenkohlakalo egcwele ozithandayo football club yakho. Ngokushesha umfana bajoyine kwesigaba football, okuyinto eside ngakho wafuna. Ingane ka eziyisithupha bonke abantu umxhwele ngethalente layo futhi "ibhola" ukuqonda umdlalo. Ngenxa yalokho, Gonzalo Castro ngokushesha waba umholi phakathi ababeseqenjini lakhe abasha. Kwakuwusuku izinkomishi kuqala, izindondo zegolide kanye nezinye imiklomelo kuye kwanqotshwa lapha.
Ehlobo lika-2002, Gonzalo Castro waba umdlali club esithandayo "Nacional". Ngo-July ngawo lowo nyaka le footballer seziqalile ukusetshenziswa kwakhe emdlalweni ngokumelene "Senral saseHispaniola." I abasha Chori engu-18 ubudala wadlalela umdlalo omkhulu, nomthelela obalulekile umphumela wayo - 3: 1 esivuna "Nacional". In the game aseqala Gonzalo Castro luye lwabonisa izinga langempela ehlasela mdlali futhi lathi lishona "mdlali." Zonke umdlalo futhi ukuhlasela amaphuzu zisekelwe emibhalweni Chori, ebangela ezimbili "ukusiza" (ukusiza).
Game Gonzalo Castro ukwanelisa ngokuphelele wonke umuntu, kokubili the club kanye abadlali abalandeli. Chori kancane kancane yakha ukwethenjelwa kwalo futhi uye waba ukhiye ngomdlali futhi ukuqala uhlelo. Lo mdlalo "tricolor" kancane kancane waqala ukwakha, okwakuqabukela ukubonwa zezinkathi eziningana. Esikhathini Uruguay Primera 2002/2003 kwaba won, kodwa Gonzalo Castro (ngezansi) waklonyeliswa "umdlali best abasha kwesizini."
Ezemidlalo solvency, isihloko uhlanga lokuqala "scorers"
Ngakusasa zonyaka ezimbalwa baye ngaphandle indondo, kodwa umdlali njalo wabonisa izibalo ezinhle futhi ubelokhu umholi yangempela iqembu. Ngo-2005, Gonzalo futhi "Nacional" Uruguay zesikhashana iwine lo mqhudelwano, futhi won igolide izindondo e Isibonelo 2005/2006. Ngenxa esiswini umdlali, Gonzalo Castro kukora inombolo crazy imigomo, eba ngomunye emigqeni abaholi "scorers" Izibonelo Uruguay.
Ukudlulisela kuqala futhi kwenye indawo ukuze Spain
Ngo-2007, i-Chori uqale ukudlulisa ekuzingeleni yangempela phakathi amakilabhu European. "Mallorca" Omunye wabo kwakungu-club football eSpain. Zombili izinhlangothi zigcine zihluleka ukufinyelela isinqumo oyifunayo, okuyinto kwagcina kuholele ekubeni ukudluliswa - Chori ingena "Mallorca" iminyaka emihlanu. Umdlali wasesiswini Uruguay ne ukuzingela omkhulu usesayine wonke amaphepha adingekayo, futhi waqala ukuthi abathathe izikhwama zakhe ukuya eSpain. Inani kuthenga Nokho hhayi eyomphakathi, njengoba umvuzo kubadlali ababengakwazi kube nenani elikhulu.
I club-Spanish Chori isikhathi eside kakhulu ukuze athole ukusizakala - umdlali kakhulu kuyaqabukela akhiqizwa uhlelo kokuqala, okuyinto kakhulu abathintekayo izinga lakhe play. Lokhu kwaqhubeka zonyaka emibili egcwele. Gonzalo Castro wahamba kakhulu kuyaqabukela ukufanisa umkhuba lalilincane. Nokho, umdlali akaphelelwa intshisekelo walinda isikhathi sako.
Kusukela 2009, unyaka ngempela wadlala ibhola. Wabonisa kwelinye imidlalo izinga enkulu "mdlali" futhi "umsizi", futhi Uruguayans baqala ehlukile kakhulu ngayo. Ezinyangeni ezimbalwa kamuva, waba umdlali ukhiye, "Abantu bakulezi ziqhingi". Ngenkathi we-Spanish La Liga 2009/2010 Gonzalo kudlalwa 35 okufanayo lapho amagoli ayisithupha kanye esiza nambili. inkathi Landelayo akuyona ezahlukene kakhulu kusukela odlule eyodwa - ". esiza" ngo-33 imidlalo 5 imigomo amaphuzu futhi 9 football izibalo kwakungezona ebanda kunazo La Liga, kodwa ngaphakathi "Mallorca" umdlali kwaba ngenye yezinkampani ezingcono kakhulu. Ngenkathi 2011-2012 we ubuqhawe Spanish Chori ungumnikazi okuphindaphindiwe imiphumela isizini 2009/2010.
umsebenzi Gonzalo Castro sika ku "Real Sociedad"
Ngo-June, leli Uruguay iphelile inkontileka "Mallorca" unyaka ka-2012. Nakuba club football kwadingeka abanye izinkinga zezimali, nokunye extension inkontileka Castro akekho kungingiza Ngenxa yalokho, isidlali football ULizwi bekakhona ephasini football nge isimo "enenkululeko." Emasontweni ambalwa nje mdlali Uruguay uthole i sipho kusukela "Real Sociedad" umyalo, futhi walamukela ngenjabulo. "I club entsha - inselele entsha, kodwa futhi inkokhelo ezinhle," - enhliziyweni yami Uruguay.
Njengengxenye 'emhlophe-oluhlaza "Castro kudlalwa iminyaka ecishe ibe mine. ESpain kakade wayazi konke, ngakho akekho wamangala lapho Chori kukora omunye abaphikisi umgomo. Ngokusho kochwepheshe, in the "Sociedad" ayihlala yakhe best football iminyaka.
Ngo-December 2016 lo mdlali Uruguay usayine inkontileka kwi shintsho "Malaga".
Imisebenzi eqenjini lesizwe Uruguay
Chori aseqala umdlalo eqenjini lesizwe Uruguay owawuse Agasti 17, 2005, lapho "Celeste" elalihlangana meshi Spain zokugcina iwine ngo 2-0. Phakathi ngesizini ezayo, Gonzalo Castro namanje izikhathi ezimbalwa wadlalela iqembu lakhe kazwelonke, kodwa ke awuzange ngokuthi kuze 2012.
Ngezinye Gonzalo "Chori" udade UJuliana, naye edlala ibhola. Julian Castro udlala yokuma umqali ngecala yavuna zabesifazane licembu lesive lesitigcabha Uruguay football kazwelonke ithimba.
Adrian Doronin: Biography nesithombe
Aleks Gonsales: Biography, Filmography, empilweni yakho